Runyoro rwekutaura (TTS) uye nyowani yakafanana neyeMicrosoft Hololens 2: Martin Vrijland
Runyoro rwekutaura (TTS) uye nyowani yakafanana neyeMicrosoft Hololens 2
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we27 September 2019	• 4 Comments
Vazhinji vanogona kunge vachiri kusava nechokwadi nezve zano rekuti isu tinogona kurarama mune chaiwo nyika mune ramangwana. Iko isu tichiri kushandisa yedu inononoka-bandwidth yekupinda nzira yehuropi hwedu, senge maziso, nzeve, mhino, rurimi, kubata uye nezvimwe, iyo BCI (Brain Computer Interface) kubva kuNeuralink (imwe yemakambani eElon Musk) ichave yatove mu2020 kukwanisa kupa nekukurumidza kudyidzana kwekudyidzana nehuropi. Ngativei vakatendeseka; tora nzeve, semuenzaniso. Iyo eardrum inofanirwa kushandura ruzha rwuchinjisa semagetsi uye uropi hunofanirwa kushandura ruzha rwuri muchimiro che, semuenzaniso, rugwaro runotaurwa kana mimhanzi. Saka pane shanduro pakati. Nhau inotaurwa inofanira kuuya neshoko neshoko kana bhuku rinofanira kuverengerwa izwi neshoko. Izvo zvingave zvakanyanya nyore kana iwe uchigona kuisa bhuku rose mu1x muuropi. Isu tiri kutungamira mune iyo nzira nekuvandudzwa kweCCI.
NeMicorsoft Hololens 2 ichiri kudikanwa kuti ipuratidze hologram seyakasarudzika chokwadi munzvimbo. NeCBI iwe unogona kuisa mharidzo inoonekera zvakananga mukati mekuona kweuropi. Zvese-zvese-zvese, zvese zvinotaridzika zvinoshamisa kwazvo (ona vhidhiyo pazasi). Nekudaro, hachisi chinhu kwatiri munguva pfupi vakamirira.
Wona Elon Musk's Neuralink mharidzo iri pazasi uye uverenge tsananguro yangu yakazara ichi chinyorwa (uye verenga zvakare pasi pevhidhiyo).
Asi izvo zvinovandudza senge izvo zveMicrosoft Hololens 2 zvakatobatsira mukuvandudza kwegadziriro iwe unogadzira nzvimbo yedhijitari iyo munhu wese anoona chinhu chimwechete kana icho hologram mune chaimo chinzvimbo, asi kubva pane imwe nzvimbo yekuona. Google yakagadzira Cloud Anchor tekinoroji uye chirongwa ndechekuveza nyika yese kuti iwe ugokwanisa kuveza zvinhu mumugwagwa wese unoonekwa nevanhu vese; munzvimbo imwe chete, asi kubva kune imwe nzvimbo. Saka iwe unogona kunyange dinosaur kufamba mumugwagwa unoonekwa nevanhu vese. Iyo Neuralink BCI kubva kuna Elon Musk kunyange inoita kuti iite kunhuhwirira mhuka mu2020, nekuti hwema uku kunogona kuiswa mukati mehuropi hwekunhuhwirira. Wese mufananidzo waunoona kana wega wekutarisisa watinoita kuburikidza nemiviri yedu macensors (maziso, nzeve, mhino, nezvimwewo) anogona kushandurwa kuva electromagnetic spectrum. Chinhu chinotyisa chinodiwa ndeye bandwidth yakakodzera uye data chairo kubva kune iro spectrum uye kuburikidza neo neuro-kubatana kwairi kunofanirwa kuverengerwa muuropi.
Sei ndiri kukupa iwe kutarisa kumwe mukuvandudza tekinoroji? Nekuti ipapo iwe unogona kunzwisisa zvinyorwa zvangu nezve chaiwo chaiwo uye uhwo hushoma zvishoma. Unogona kuwana izvo zvinyorwa pazasi ichi menyu chinhu. Mandiri bhuku idzva Ini ndinotsanangura chikonzero nei ruzivo urwu rwakakosha. Iwe uchawana kuravira mune zvinyorwa pasi pezvakataurwa menyu chinhu.
Tinogona kudzora mugumisiro wekuenzanisa uku here?
Teerera kutsanangurwa kwaElon Musk kwevechave pedyo munguva iyo yatiri kunyanya kufungidzira mukuenzanisa
Elon Musk ane ukama nemurume we transgender here? Dzidza mimhanzi yeGrimes pano
Tags: 2, kuwedzera, Elon, Featured, Hololens, Microsoft, Musk, Neuralink, chokwadi, simulation, rakapotsa
28 September 2019 pa 07: 06
Kurota pamusoro peizvi, isu tinotarisira kuuya kunoshamisa kwevatorwa, kunyanya yakapihwa mishumo yazvino muMSM, kune Hondo nyowani yezvipuka zvinobuda, semuenzaniso.
Kadhi yekupedzisira iri kuuya here chaizvo, ndiani anoziva. Werner von Braun anoita kunge akazvitaura maererano nemukadzi uyu. Iwo masimba ave kuve akaisa ino kuburitsa pachena purojekiti ine yakawanda bhomba.
Ndege mudenga mhepo inovhuvhuta kwavari panguva ino, izvo zvatinoona pamusoro apa ndizvo zvavanoda kutivone, ini ndinofunga vanokwanisa dzimwe nguva zhinji, tave kuenda kunozviona.
28 September 2019 pa 17: 18
haukwanise kumirira iyo, iyo tray yeBelgian abbey doro yatosvika. Serge Monast akafanotaurirawo izvi mumakore epakati '90 neiyo yaakadana chirongwa chebhuruu danda .. isu tinogona kuona zvakasiyana neiyo yakasarudzika yekiriniki TR-3B. Ndakatoona akati wandei nekamera yangu husiku, mimwe yakakura se2-3 masimu ebhora..NATO zvigadziko zvinoita kunge zvine mukurumbira.
Folding chair yatogadzirira…
29 September 2019 pa 19: 55
HAARP & Pfungwa Kudzora - Ingori Chokwadi
1 October 2019 pa 09: 59
« Papa Francis anoshevedza vatungamiriri venyika kuenda kuVietnam pa14 muna Chivabvu 2020 kuti ipanganise nyika
Greta Thunberg 'vanotsoropodza vanoita zvechisimba tsika dzisina kunaka kushaya vana-vasina hushamwari': kuguma kwechikonzero »
Total Visits: 13.090.419
Hare op Iyo 'ghost mhuri' PsyOp (kushanda kwepfungwa): kutora rusununguko rwako uye kukwazisa 'pfungwa dzemapurisa'
Camera 2 op Nei iyo transgender inova tsika itsva yeiyo 21 yezana uye iye murume nomurume vanonyangarika